Shiinaha Soosaarayaasha Gawaarida Iskuxirka | qaybiyaha motor synchronous
Shiinaha Soosaarayaasha Gawaarida Iskuxirka | qaybiyaha motor synchronous Shiinaha
A synchronous motor halbeegga waa hubaal inuu yahay mootada AC taas oo, xaalad joogto ah, wareegga usheeda dhexe la iswaafajiyo iyadoo la adeegsanayo inta jeer ee laga imaado xilliga xilligan wareegga uu si sax ah ula mid yahay tirada muhiimka ah ee wareegyada AC.
Waxay ku socotaa internetka korantada aasaasiga ah (seddex waji, 380v, 50HZ) Isbadal la'aan.
Dhamaad sare: rotor wuxuu isticmaalaa walxaha dhifka ah ee PM. Awoodda aagagga sare ee magnetic, Awoodda bilowga weyn, bilowga yar ee yar, iyo kala duwanaanta xawaaraha ballaaran
Cabbir yar iyo miisaan khafiif ah: Qiyaasaha jirku waa hal ama laba qaabab cabbirkoodu aad u yaryahay marka la barbar dhigo mootada AC asynchronous ee isla HP
Cunsur sare iyo awood, kufiican keydinta tamarta: waa 5% ilaa 12% ka waxtar badan mishiinka asynchronous isla HP. Sababtoo ah matoorku uma baahna socodka xiisaha leh, cunsurku wuxuu ku dhow yahay 1Save oo ku saabsan 10% Tamarta marka loo eego mootada asynchronous.
Cimri dherer: Sababta oo ah hoos u dhaca kuleylka iyo yareynta mootada
Dhignaashada: Waa qaab dhismeed isku mid ah oo leh AC asynchronous motor waxaana loo isticmaali karaa in lagu beddelo AC mishiinka asynchronous
Ku-habboonaanta Wide: Waxaad u isticmaali kartaa xaalado kala duwan oo adag.
Matoorrada iskudhafan waxay ku daraan elektarooniyeyaal fara badan AC AC gudaheeda stator-ka mootada taasoo abuureysa aag magnet ah oo isku bedbeddeleysa waqtiga iyadoo la marayo wareegga qadka jira. Rotor-ka leh birlabadaha muddada-dheer ama elektromagnetka ayaa masraxa u rogaya dhammaan anshaxa 'stator' isla heer ahaan iyo natiijo ahaan, wuxuu bixiyaa edbinta magnet-ka wareega ee isku-dhafan ee mootada AC kasta. Mashiin isku mid ah ayaa la yiraahdaa laba jeer ayaa la siiyaa haddii la bixin karo iyada oo si madaxbanaan loo sii daayo elektaroonigga AC multiphase labadaba rotor iyo stator.
Shiinaha AC Mashiinka Iskuxirka | Shirkadaha Mashiinka Wadajira Shiinaha
Mashiinka iskudhafka ah iyo matoorka induction waa noocyada ugu badan ee la isticmaalo ee AC motor. Farqiga ugu weyn ee ku lug leh labada nooc ayaa ah xaqiiqda ah in mishiinka isku dhafan uu ku wareegayo khidmad lagu xiray inta jeer ee xariiqda la siiyay taasoo ah inuusan ku tiirsaneyn soo-kicinta ugu dambeysa si loo soo saaro anshaxa rooga ee rotor-ka. Taas bedelkeeda, mashiinka soo-kicinta wuxuu u baahan yahay siibasho: rotor waa inuu rogrogaa xoogaa gaabis ah marka la barbardhigo is-beddelka AC-ga oo ah hab lagu soo jiito rotor-ka rogista Mashiinno iskudhafan oo yaryar ayaa loo adeegsadaa codsiyada waqtiga sida saacadaha isku dhafan, saacadaha qalabka, cajaladaha wax lagu duubo iyo farsamooyinka saxda ah ee ay mootadu ugu baahan tahay inay ku shaqeyso xawaare sax ah; saxnaanta xawaaraha waxay ku jirtaa inta jeer ee xarigga korantada, kaas oo si taxaddar leh loogu xakameeyo farsamooyinka shabakadaha waaweyn ee isku xiran.
Matoorro isku mid ah ayaa lagu heli karaa cabbiro hoosaadyo hoosaadyo isku kalsooni ku dheehan tahay illaa heer warshadaha tamarta sare leh. Inta lagu jiro xulashada faraska jajabka, matoorada iskudhafka badankood waxaa lagu dabaqaa halka saxda saxda ah ee joogtada ah looga baahan yahay. Mashiinadan waxaa sida caadiga ah loo adeegsadaa saacadaha korantada analogga, saacaddo ay la socdaan cutubyo kale oo waqtiga saxda ah loogu baahan yahay. Qiyaasaha warshadaha tamarta badan, mishiinka iskuxira wuxuu bixiyaa laba shaqooyin muhiim ah. Ugu horreyn, waxay noqon kartaa runtii waxtar badan oo macnaheedu yahay badalida awoodda AC si ay u shaqeyso. Ta 2aad, waxay suurtagal noqon kartaa inay ku shaqeyso mid weyn ama midnimo quwadda korantada isla markaana ay ku siiso sixitaan awood-cuno.